भगवान् श्रीरामको राज्याभिषेक समारोह भइरहेको थियो । रामले कौशल्यासंग भने- ‘आमा ! म राजा भएँ । मैले आफूभन्दा सानालाई केही दिनुपर्छ । तपाईँ सबैलाई बोलाएर केही न केही माग्न भनिदिनुस् ।’ भरतलाई बोलाइयो । ‘तपाईँको पाउमा मेरो दिनप्रतिदिन प्रेम बढ्दै जाओस्’ भन्दै लिन इन्कार गरिदिए । भरतपत्नी माण्डवीको भनाइ थियो- ‘गुरुकुलकी बुहारी बन्न पाएकी छु ।
त्यही नै मेरो सौभाग्य हो ।’ अब पालो लक्ष्मणको थियो । उनले भने- ‘सानैदेखि हजुरसँग जीवन बिताएँ, बाँकी जीवन पनि यसैगरी बितोस् ।’ उर्मिलाले भनिन- ‘जतिसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि धैर्यवान् बनौँ । शत्रुघ्नले पनि भरतकै बचन दोहोर्‍याए ।
अन्तिममा शत्रुघ्न पुत्रीलाई बोलाएर श्रीरामले आग्रह गरे- ‘भन छोरी श्रुतिकीर्ति तिमीलाई के चाहियो ?’ उनले आँखाबाट आँसु बर्साउँदै भनिन- ‘वनवासमा रहँदा तपाईँले लगाउनु भएको लुगा कृपा गरेर मलाई बक्सियोस् ताकि भोलि आउने दुखलाई त्याग र समर्पणको सिद्धान्तले परास्त गर्न सकौँ । यसैले थोत्रो लुगा बक्स्योस् भन्ने चाहन्छु ।’
यदि राजनीतिभित्र अपराध र दलाली फस्टाएको हुँदैनथ्यो भने यतिबेला शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले लगाएका भादगाउँले टोपी प्रसाद मानेर लाउनेहरूको भीड लाग्थ्यो होला । भूमिगत हुँदा प्रचण्डले रोल्पामा भात खाएको त्यो सिल्भरे थाल सङ्ग्रहालयमा हुन्थ्यो । युद्धताका उनले लगाएको फौजी पोसाक किन्न मोल लाउनेहरूको लडाइँ चल्थ्यो होला ।
देउवा र ओलीले काल कोठरीमा बिताएका दिनको संस्मरण उच्च माविमा पढ्ने टिनएज पुस्ताका लागि गीता, बाइबल, कुरान हुन्थ्यो । तर विधिको विडम्बना देशको सफल अभिभावक भएर छोरा पुस्तालाई देशको कार्यभार सुम्पनुपर्ने बेला राजनीतिमा सिण्डिकेट खडा गरी छोराको जवानी समेत पैँचो लिई भोग विलास गर्ने आध्यात्मिक पात्र ययातिको गुण उनीहरूमा थपक्कै सरेको छ ।
ययाति यस्ता आरिसे ऋषि थिए, जो गधा पच्चीस ननाघेका आफ्नै छोरा पुरुको आयु लिएर भोगविलासमा लिप्त भए । यहाँ पनि पुरानो पात यस्तो थेत्तरो भएको छ कि नयाँ पातको भाग खोज्न लालायित छ । आफूलाई क्रान्तिको अग्रदूत भन्ने पार्टीका नेताहरूले तीन दशकदेखि केन्द्रीय नेतृत्व छोडेका छैनन् ।
धेरैका बा आमाले धार्मिक ग्रन्थबाट प्रभावित भएर आफ्ना सन्ततिको नाम राम, कृष्ण, शिव, गणेश, कमल, पशुपति जे राखेपनि त्यसको परागबाट समाज कहिल्यै सुगन्धित भएन । बरु उनीहरूको कर्मका कारण जनताको पुर्पुरो अलैँचीजस्तै बन्यो । जब अलैँची सुगन्धले पूर्ण हुन्छ, त्यतिबेलै उसको शरीरमाथि लोहोरो बर्सिन्छ ।
यदि राजनीतिभित्र अपराध र दलाली फस्टाएको हुँदैनथ्यो भने यतिबेला शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले लगाएका भादगाउँले टोपी प्रसाद मानेर लाउनेहरूको भीड लाग्थ्यो होला ।
ऐतिहासिक धार्मिक नगरी जनकपुर जहाँ राजा जनकले आफ्नी छोरी सीताको विवाह समेत सुरवीरहरूको जमघट गराई धनु उचालेर गराएका थिए । जुन प्रजातान्त्रिक अभ्यासको उत्कृष्ट नमुना थियो । नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य त्यही माटोमा जन्मिएका रामवरणलाई पहिलो राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य प्राप्त भयो, तिनै पात्र जीवनको उत्तरार्द्धमा नाना, खाना र छानाको लोभबाट मुक्त हुन सकेनन् ।
उनले निवृत्त जीवनलाई साधुशैलीमा अनुवाद गरिदिएको भए, अब त्यो पदमा आसीन कुनै पनि मानिसमा लोभी नहुन नैतिक दबाब पर्ने थियो । उनका पिताजीले भगवान् श्रीरामको जीवन आफ्नो सन्ततिमा देख्न चाहे पनि सफल भएनन् ।
ग्रन्थमा बाहेक यसखाले आदर्श पुरुष बन्ने सौभाग्य नेपालका कुनै नेतालाई प्राप्त भएन । गणतन्त्रले त झन् राज्यको ढुकुटी लुट्नेहरू राजनीतिका स्वर्णपदकधारी भए । राजाहरूलाई ‘निरङ्कुश वंशवाद’को आरोप लगाएर डाम्ने नेताहरू ‘परिवारवाद’बाट माथि उठ्न सकेनन् । नेताहरूको परिवारवादलाई गणतन्त्रको गजुर बनाइयो ।
औँसीमा गरिएको पीच पूर्णिमामा भत्किनु, तीन दशकसम्म मेलम्ची मिथक बन्नु, पैसाविना राज्यका सेवा प्रदायक निकायले उपभोक्ता नचिन्नु, धाराको टुटीबाट पानीको साटो हावा आउनु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कालोबजारी मौलाउनुको मूल जरो गणतन्त्र दिगो बनाउने नाममा गरिएका कुकर्ममा गएर ठोक्किन्छ ।
माओवादी सशस्त्र युद्धबाट पीडितहरू झन्झन् पीडित बन्दै गएका छन् । तर त्यसलाई लिएर व्यापार गर्नेहरू थपिँदा छन् । जब एउटा ठेकेदारले पूर्वाधारको सट्टा भावी प्रधानमन्त्री जन्माउने ठेक्का पाउँछ भने उसले मजबुत सडक बनाउने कष्ट किन गरोस् ?
दुई तिहाइको यो सरकार असफल भयो भने के हुन्छ ? यो प्रश्नले धेरैको शरीरमा काँडा उम्रन्छ । तर, त्यसको उत्तर सरल छ- अर्को सरकार आउँछ । हिजो संविधान बनेपछि रामराज्य हुन्छ भनेर दिनरात भाषण गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईहरू सम्पूर्ण समस्याको दोष आफैँले बनाएको संविधान दिँदै त्यस विरुद्ध विषवमन गरिरहेका छन् ।
राजनीति चलाउने शिल्पी नै छेपारो भएको देशमा ढुक्क भएर भन्न सकिन्छ- यो सरकार गएपछि पनि प्रकृतिका हरेक नियम पहिलेकै गतिमा चलायमान हुनेछन् । २४ घण्टाको दिन एक सेकेण्ड थपघट हुने छैन । नेपालको गणतन्त्र पतन भएको प्रभाव स्वरूप अन्तरिक्षको सन्तुलन गुमेर सूर्यले चन्द्रमाको परिक्रमा थाल्ने छैन ।
जतिसुकै भोकाए पनि बाघले किमार्थ घाँस खाने छैन । सिंहदरबार चिडियाखाना र चिडियाखाना सिंहदरबारमा सर्ने छैन । राजधानीमा गुड्ने मोटर ब्याक गियर लगाएर पछाडि कुद्ने पारिने छैन । कुनै राजनीतिक दलका नेता, देशका उच्च प्रशासक र सभासद्हरूको न बर्दी घटने छ, न सुविधा कटौती नै गरिनेछ ।
समानुपातिकका नाममा सांसदभित्र छिराइएका नेताका हुक्के, ढोके, चम्चे, बैठके, नन्दी, भृङ्गी, साला, जेठान गर्लफ्रेन्डले त्यहाँ गएर दिनभर उँगेबापत पाउने सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । नेताका कानैमा पुगेर ट्याँयाँयाँ गर्ने बा-हमासे लामखुट्टेजस्ता दलालहरू अर्को बजार खोज्दै बसाइँ सर्ने छन् ।
गणतन्त्रले त झन् राज्यको ढुकुटी लुट्नेहरू राजनीतिका स्वर्णपदकधारी भए । राजाहरूलाई ‘निरङ्कुश वंशवाद’को आरोप लगाएर डाम्ने नेताहरू ‘परिवारवाद’बाट माथि उठ्न सकेनन् । नेताहरूको परिवारवादलाई गणतन्त्रको गजुर बनाइयो ।
राजनीतिमा मात्र हैन, हामीले दैनिक भोग्ने र सुन्ने आख्यानका नियति उस्तै छन् । रामायणकालीन महर्षि परशुराम यति घमण्डी र रिसाहा थिए कि जो सँग पनि लड्न तयार हुन्थे । कतिसम्म भने आफ्ना पिताजी क्षेत्रीयसँगको युद्धमा मारिएपछि उनले क्षेत्रीलाई विद्या नै नसिकाउने सङ्कल्प गरे ।
आखिर आख्यानको त्यही हठी परशुराम पात्रका अवतारहरूले अहिले पनि समाजमा विचित्र लीला देखाइरहेका छन् । यी पात्रहरु कतै गुण्डागर्दीको कमाइमा कानुन आफ्नो मुट्ठीमा कैद गर्ने अघोरी त कतै जातीय नारा उचालेर वर्ग विभाजनको अभियन्ता बन्दै हिँडिरहेका छन् । समाधानमा पनि समस्याको बखेडा झिक्नु यिनीहरूको खेलो फड्को बन्दै आएको छ ।
यहाँ त डाक्टर, पुजारी, न्यायाधीशसमेत पार्टीका झण्डेहरु छन् । दुई पैसाको बुद्धि नभएकाहरू झण्डा बोकेपछि बुद्धिजीवी कहलिन्छन् । दलका नेताको सौजन्यमा प्राप्त कालो कोट लगाएर बार बेन्चमा न्यायको तराजु बोक्न माथापच्ची चल्छ । न्याय सेवामा काम गर्ने धेरै खरिदार सुब्बा एलएलएम डिग्रीधारी भइसके तर सर्वोच्च अदालतमा बल्लतल्ल बीएल पासको खोस्टो लिएकाहरूको भीड छ ।
देशका संवेदनशील निकाय भद्र, योग्य, प्राज्ञिक नभएर चट्केहरुको माखे साङ्लोमा पर्दै गएको छ । पहिला पहिला हारेका मानिसलाई ठूलो अवसर दिइन्थ्यो भने अहिले हारेका दलहरु ठूलो भाग पाउने उल्टो यात्रामा शासन व्यवस्थाका पाङ्ग्रा गुडाउने प्रतिस्पर्धा छ । सरकार प्रमुखको गद्दीमा बस्ने विरलैले मात्र कुर्सी आरोहणको रङ्ग बचाउन सकेका छन् ।
राजनेताको अवसर पाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला कुन प्रारब्धले राजनीतिक डनमा सीमित भए ? तिलस्मी पात्रबाट अवतरण गरेका कुचा मुठे जुँगाधारी प्रचण्ड एक दशकमै निगाहका पात्र कसरी बने ? दरबारका प्याराहरू गणतन्त्रका उत्तिकै वफादार कसरी भए ? यहाँ एउटा त्यस्तो निकाय बाँकी छैन, जहाँ चलखेल नभएको होस् । सबै थोक फाप्यो भन्दैमा नेताहरूले पानीमा पानीले पानी लेखेपनि बुझिन्न क्यारे ।
पहिला पहिला हारेका मानिसलाई ठूलो अवसर दिइन्थ्यो भने अहिले हारेका दलहरु ठूलो भाग पाउने उल्टो यात्रामा शासन व्यवस्थाका पांग्रा गुडाउने प्रतिस्पर्धा छ । सरकार प्रमुखको गद्दीमा बस्ने विरलैले मात्र कुर्सी आरोहणको रंग बचाउन सकेका छन् ।
नियति कस्तो भने आँखाका सिद्धहस्त बीपीपुत्र डा. सशांक कोइराला हजारौँको आँखामा ज्योति छर्ने सीपलाई घात गर्दै उल्टो आँखामा खरानी छर्ने चटके राजनीतिमा होमिए । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, रुसका शक्तिशाली राष्ट्रपति मिखाईल गोर्भाचोभले कलेज पढाएकोमा आत्मगौरव गर्नेहरू रामवरणलाई गरिबको निःशुल्क उपचार गर्ने सल्लाह किन दिँदैनन् ?
कलकलाउँदो फूलको मालासँगै स्वार्थका झुसिल्किरा लिएर सिंहदरबार पस्नेहरूको झुण्डबाट गिरिजाप्रसाददेखि प्रचण्डसम्म रङहीन, ढङ्गहीन हुन पुगे । आफूmले भनेको नमानेको झोँकमा सचिव, सहसचिवसम्मलाई ‘कू’ गर्न पछि नपरेका बाघ गिरिजाप्रसाद अदालतको वैशाखी टेकेर आएका तिनै कर्मचारीको बाख्रे घेराउमा परेर देउरालीको ढुङ्गोमा सीमित भए ।
कर्मचारी थर्काएर हैन, फकाएर काम लिने शक्ति हो भन्ने थोरै विवेक राख्न नसक्दा राजनीतिक परिवर्तन न हाँस न बकुल्लो बन्दै आएको छ । कर्मचारीको इतिहास चाकरीतन्त्रबाट शुरु भएको हो । पुस्तैनी शक्तिको चाकरीमा जुटेको परिवारभित्रको पाँच पासेलाई न्यायाधीश बनाइदिने तर निर्धो, सहाराविहीन पढेलेखेकालाई विचारीमा थन्क्याइदिने राणाकालीन तदर्थवादको ऐँजेरु छिमल्ने प्रयास कसैले गरेन ।
अयोग्यहरूको भीडमा योग्यहरू हराउँदै गए । पदीय कर्मभन्दा पनि ठूलाहरुलाई रिझाउने विशेष योग्यता भएकाहरूको पहुँच दिन दुईगुना रात चारगुनाका दरले बढ्यो । समस्याको गाँठो फुकाउने विन्दुमा सबै निरपेक्ष रहँदै आए । बीपीले जेलमा बस्दाको एउटा स्मरण लेखेका छन् । जसमा उनी भन्छन्- ‘आमाको चिट्ठी आएको थियो ।
वहाँ लगभग सत्तरी वर्षको र म एकाउन्न वर्षको छोरो जो अनिश्चित कालका लागि चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि जेलमा थुनिइरहेको छु । उहाँले लेख्नु भएको थियो- ‘मैले तिमी जन्मिदा छोराको सम्बन्धमा जुन ठूलो कल्पना गरेकी थिएँ, जसले मलाई आत्मविश्वास र आनन्द दिएको थियो । त्योभन्दा बढी मेरो कल्पनाभन्दा बढीको कुरा तिमीले मलाई दिलायौ, जसले मलाई ठूलो गर्व छ । तिमी मैले कल्पना गरेभन्दा ठूलो छोरा भयौ ।’ एकपटक छातीमा हात राखेर सोचौँ त हामी कति आमाका सपनाको हकदार हुन सक्यौँ ?
राजनीतिमा विज्ञता सधैँ फापसिद्ध नहुन सक्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ देश हितमा सरकारमा पुगेकाहरूले आफ्नो विगत बिर्सिएर सकारात्मक मुर्ख्याइँ गर्नुपर्छ । पृथ्वीनारायण शाहले योग्य मानिसलाई उचित पदमा राखे ।
न्यायलाई जनताको अधिकारका रूपमा स्थापित गराए । राज ज्योतिष कुलानन्द ढकालदेखि विज्ञ, विद्वान, सुरवीर मात्र हैन, बिसे नगर्चीलाई पनि साथ लिएर हिँडे । यसको प्रतिफल गोर्खामा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाह मुलुकको आधिपत्य जमाएर ५२ वर्षको उमेरमा त देहत्याग गरे ।
इतिहासका यी हरफबाट नेतृत्वले पाठ सिक्न जरुरी छ । नत्र सत्ता उही म्युजिकल चियर त हो, को आएर बस्छ पत्तो हुन्न ।
नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाका पालाका कवि सुन्दरानन्द बाँडाले राजाका भारदार गाँजा तान्ने गँजडी जुवाडे थिए भनेर लेखेका छन् । उनी भन्छन्- ‘ऐलेका भारदार दुनियाँसमेत रातबिरात जूवा खेलनामा लाग्याका छन् कोही गाँजा लि खान्छन् , गाँजाले मातियाका भारदारले क्या सही राख्दछन्, कोही बक्सिस भया पनि वस्तु पाउँदैनन्, कोही सन्दुक भरी राख्दछन् ।’
भीमसेन थापाको कार्यकाल समाप्त भएको झण्डै २ सय ५० वर्षपछि ३८ औँ प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीका सहयोगी विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा त्यही स्तरको आलोचना छ । राज्यका संयन्त्रमा व्यवस्थापकीय सुधार नहुँदाको परिणाम हो यो ।
प्रकृतिमा निर्विकल्प प्रकृति मात्र हो । हामीले मान्दै आएको मृत्युलाई पनि कतिपयले अन्तिम होइन भनेर व्याख्या गर्न थालेका छन् । उनीहरूको तर्क छ- अक्टोपसले शंखेकिरा खान्छ ।
तर अक्टोपसले पेटमा पार्नुअघि नै शंखेकिराले हड्डीको खोलभित्र हालेर आफूलाई सुरक्षित गरिसकेको हुन्छ । जब शंखेकिरा अक्टोपसको पेटमा पुग्छ तब खोलबाट निस्कने शंखेकिराले अक्टोपसलाई सिद्ध्याउँछ । अन्तिममा अक्टोपस मर्छ । तर शंखेकिरा जस्ताको तस्तै । हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तन पनि त्यस्तै भएको छ ।
घटनाक्रम जे सुकै होस् तर प्रकारान्तरमा पञ्चायती राजनीति अर्थात् राजसंस्थाका अनुचरहरू नै अरूभन्दा सुकिला देखिँदै आएको परिस्थिति छ । गणतन्त्र नामको गोलचक्करले जितेर हार्नुपर्ने अनौठो चक्रव्यूह खडा भएको छ । देशभित्रै जनता शरणार्थी बनेका छन् । विवेकका आँखा दिनदहाडै बन्द छन् । इतिहासका यी हरफबाट नेतृत्वले पाठ सिक्न जरुरी छ । नत्र सत्ता उही म्युजिकल चियर त हो, को आएर बस्छ पत्तो हुन्न ।
बाहिर झण्डा, भित्र डण्डा
विषादीलाई बुझौँ, यो विष हो खेलाँची नगरौँ
पैसा झोलामा, विचार खोलामा
भोकतन्त्र नदेखिने लोकतन्त्र
कांग्रेसको आगामी बाटो
गोजीसँग हारेको रोजी